Duqa Muqdisho oo Aqalka Sare kala hadlay Matalaada siyaasadeed ee ka maqan dadka Muqdisho – XAMAR POST
Duqa Muqdisho oo Aqalka Sare kala hadlay Matalaada siyaasadeed ee ka maqan dadka Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa la kulmay Guddiga Arrimaha Gudaha, Dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada ee Aqalka Sare, isagoo uga warbixiyay qorshayaasha u degsan maamulkiisa iyo caqadaha heysta.
Guddoomiye Yariisow ayaa la wadaagay xubnaha Aqalka sare baahida shacabka Muqdisho u qabaan inay helaan matalaadooda siyaasadeed iyo xuquuqda ka maqan, maadaama ay yihiin shacabka kaliya ee bixiya canshuurta.
“Waxaan aqalka sare Xaruntooda kulan dheer kula qaadanay Guddiga Arrimaha Gudaha, dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada, waxaa la wadaagnay caqbadaha na heysta iyo qorshayaasha noo deqsan iyo in shacabka Muqdisho ay Mas’uuliyiinta mataleysa ka sugayaan matalaada siyaasadeed iyo xuquuqdooda inay u baahan yahay, si nidaamka federaalka xuquuq wada siman u helaan, si caddaalad iyo sinaan u helaan xuquuqda ka baqan”ayuu yiri Eng. Yariisow.
Waxaa uu sheegay in xubnaha Aqalka sare ay ka balan-qaadeen sidii xuquuqda ka maqan ay ugala shaqeyn lahaayeen, isla markaana ay sii wadayaan dadaalkooda ku aadan raadinta maqaamka Caasimadda iyo matalaada ay ku lahaayeen siyaasadda dalka.
Sidoo kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta laamaha ammaanka heer Federaal iyo Maamulka Gobolka Banaadir, isagoo tilmaamay in ay ka shaqeeyeen xoojinta kaalinta ay ku leeyihiin shacabka Gobolka sugidda ammaanka iyo la shaqeynta hay’adaha amniga.
Gobolka Banaadir ayaa xuquuqdiisa matalaad ku laheyn Aqalka sare, iyadoo aanay wali caddeyn maqaamka uu leeyahay, waxaa horay u jiray dibad baxyo lagu dalbanayay matalaada siyaasadeed ee Muqdisho ayaa ka dhacay Muqdisho, walina si buuxda uma helin, waxaana laga sugayaa Baarlamaanka labada Aqal inuu caddeeyo maqaamka Muqdisho iyo matalaadeeda siyaasadeed.
Wasiirka Waxbarashada oo ka hadlay musuq maasuqa ka jira Imtixaanaadka FPENS
DHAGEYSO: Dowlada Somalia oo sanad kasta laga xado 24 milyan oo dollar ﴾Warbixin xasaasi ah﴿